Njengoba umyeni wami wayengeyena umuntu ozibandakanya emsebenzini wokwethembeka, wayevame ukuphuza utshwala futhi engabonakalisi kukhathalela izindaba zomndeni, ngangivame ukucwila enhliziyweni embi nasebuhlungwini. Esikhathini lapho ngingenamandla okuzabalaza ngiqhubeke, isihlobo esithile sangilethela ivangeli lombuso kaNkulunkulu uSomandla. Ngokufunda izwi likaNkulunkulu, ngaqonda ukuthi: UNkulunkulu uveza iqiniso futhi wenza umsebenzi wokwahlulela wezinsuku zokugcina ukuze asindise isintu ezandleni zikaSathane. Uyala umuntu ukuba aqonde, alalele futhi abuyele kuYe ukuze athole ukuvikela nokunakekela Kwakhe. Ngenxa yalokho, ngawamukela ngenjabulo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina futhi ngashesha ngaqala impilo yami yasebandleni. Kodwa-ke, njengoba nje ngangithola into engangingancikisa impilo yami kuyo futhi nginomuzwa wokujabula nokwesasa, izilingo zikaSathane zangihlasela njengesilo sasendle sibhozomela inyamazane kwase kuqala impi kamoya ...
Ngaso lesi sikhathi lapho ngase ngizosibekelwa ubuhlungu nokuphelelwa yithemba kwami, ngacabanga amazwi kaNkulunkulu: “Uma wehlelwa izinto eziningi ezingahambisani nemibono yakho kodwa ukwazi ukuzibekela eceleni futhi wazi izenzo zikaNkulunkulu kulezi zinto, futhi phakathi nokucwengwa wembula inhliziyo yakho yokuthanda uNkulunkulu, lokhu kuwukufakaza. Uma ikhaya lakho linokuthula, ujabulela ukunethezeka kwenyama, kungekho okushushisayo, abafowenu nodadewenu ebandleni bekulalela, ungayibonisa yini inhliziyo yakho yokuthanda uNkulunkulu? Ingabe lokhu kungakucwenga? Uthando lwakho ngoNkulunkulu lungaboniswa ngokucwengwa kuphela, futhi ungapheleliswa kuphela ngezinto ezenzekayo kodwa ezingahambisani nemibono yakho. UNkulunkulu ukuphelelisa ngezinto eziningi ezingezinhle, nezinsizi eziningi. UNkulunkulu ukuvumela ukuba uthole ulwazi futhi akuphelelise ngezenzo eziningi zikaSathane, izinsolo, nezinkulumo zabantu abaningi” (“Labo Abapheleliswayo Kumele Bacwengwe Kuqala” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngamazwi kaNkulunkulu, ngaqonda ukuthi uSathane wayesebenzisa ukugula komyeni wami ukusebenzisa amacebo akhe. Njengoba umbono wami wokuthola izibusiso ezivela kuNkulunkulu nokwenza ukuhwebelana noNkulunkulu ngokholo kwakungakapheli ngokuphelele, uSathane wenza lokhu ukuze angikhohlise ukuba ngingaqondi kahle, ngisole, ngiphike, ngikhaphele uNkulunkulu. Uma ngenza lezi zinto, ekugcineni, ngizolahlekelwa umusa kaNkulunkulu. Ngesikhathi esifanayo, uNkulunkulu wasebenzisa lolu hlobo lwesimo ukuze aphelelise ukholo lwami Kuye, ukuze ngikwazi ukubona izinto ngokuvumelana namazwi kaNkulunkulu bese ngingena shi phakathi kwamacebo kaSathane. Akufanele ngithembele enjongweni yami yokuthola izibusiso ukuze ngihwebelane noNkulunkulu futhi. Empini ephakathi kukaNkulunkulu noSathane, kumele ngime ohlangothini lukaNkulunkulu futhi ngifakaze ngoNkulunkulu. Emva kokuqonda izinhloso zikaNkulunkulu, ngathandaza ngokuthula kuNkulunkulu, "Nkulunkulu, vikela inhliziyo yami. Ngenze ngime ngiqine kule simo. Noma sinjani isimo somyeni wami, ngeke ngakusola. Ngisho noma umyeni wami ekhubazekile, ngizimisele ukuqhubeka ngikulandele. “Ngingazelele, ngemva kokuqeda ukuthandaza, ngezwa umyeni wami ngentokozo ethi, Sengingcono. Sengiyakwazi ukunyakazisa imilenze yami.” Inhliziyo yami yathinteka kakhulu futhi ngezwa ukuthi uNkulunkulu ngempela uhlakaniphile futhi unamandla onke! UNkulunkulu akazange angenze ngizwe lobu buhlungu ngenhloso. Esikhundleni salokho, wasebenzisa lesi simo ukuze angivivinye futhi alungise ukucabanga kwami okwakungalungile ngokholo!